နေ့စဉ်လူ့ဖြစ်လျက်ရှိ၏ဘဝအသက်တာထဲတွင်မိသားစု၏အရေးပါမှုကိုအထင်ကြီးဖို့အတော်လေးခက်ခဲ။ ခိုင်ခံ့ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစု၏ရှေ့မှောက်တွင်အခြေခံအကျဆုံးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာစွမ်းအင်ကြီးမားတဲ့အရင်းအမြစ်ပါပဲ။ ထိုမိသားစုသည်လူ့လူမှုဆက်ဆံရေး၏အရေးအပါဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်, ဒီမှာတစ်ဦးချင်းစီအဖြစ်ဒါပေမယ့်လည်းနိုင်ငံသားအဖြစ်သာက၎င်း၏ဖွဲ့စည်းရေးဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, စက်တင်ဘာလ 20, 1993 ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတစ်ဦးပွဲတော်ကိုဖန်တီးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် "မိသားစုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေ့။ " မိသားစု Day ကိုနှစ်စဉ်စောငျ့ရှောကျဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီနှင့်အားလပ်ရက်များရက်စွဲမေလ 15 ရက်နေ့တွင်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
ဒီဆုံးဖြတ်ချက်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာမိသားစုများအတွက်ပြဿနာတွေအများကြီးမှကမ္ဘာ့အာရုံစိုက်ဖို့ပဲ။ လောကဓာတ်လုံးကိုယနေ့နှငျ့ရငျဆိုငျဖြစ်ပါတယ် Single-မိဘမိသားစုများ၏ပြဿနာများ နှင့်ကွာရှင်း၏ကြီးမားသောအရေအတွက်သည်။ ဒါဟာအစရရှိမှုလူငယ်များအကြား ပို. ပို. လူကြိုက်များဖြစ်လာ အရပ်ဘက်လက်ထပ်ထိမ်းမြား ။ ဒီတစ်ဦးကအကြောင်းပြချက်တာဝန်ရှောင်ရှားရန်လူငယ်များ၏အလိုရှိ၏။ ကလေးများ, သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေ - ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုလူဦးရေရဲ့အများဆုံးအားနည်းချက်အစိတ်အပိုင်းများခံရဟူသောအချက်ကိုစေပါတယ်။
ဤသည်အားလပ်ရက်ပြက္ခဒိန်၏ "အနီရောင်" နေ့သည်မဟုတ်, အဲဒါကိုသတိပြုရကျိုးနပ်မဟုတျကွောငျးမဆိုလိုပါ။ နိုင်ငံတော်ကဤဖြစ်ရပ်ကိုမြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ရေးရာဖြစ်ရပ်များမိသားစုကိစ္စများနှင့်ပူးတွဲငြိမ်ဝပ်စွာနေရသောအဖွဲ့အစည်းဖြေရှင်းရန်ဤနေ့၌ကျင်းပကြသည်။ ယင်းဝိုင်းအတွင်းရှိဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောပါဝင်မှုမိသားစုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးပါဝင်သော, အပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများအမျိုးမျိုးကိုဆက်ကပ်။ လူငယ်များအဘို့မိသားစုများနှင့်ရှိခြင်းသားသမီးများ၏ဖန်တီးမှုကိုအားပေးကြောင်းလက်ရှိပြည်နယ်အစီအစဉ်များကိုဆကျသှယျ။ ထိုသို့သောဖြစ်ရပ်များအမြဲအချင်းချင်း communicate နှင့်ကလေးများပြုစုပျိုးထောင်မိဘများသင်ပေးတဲ့သူစိတ်ပညာရှင်သွားရောက်လည်ပတ်ကြသည်။ ဒါ့အပြင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှင့်အတူတစ်အချို့နှောင်ကြိုးခံစားရရန်အသီးအသီးမိသားစုဝင်ကိုကူညီစိတ်ဝင်စားဖို့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်ပြိုင်ပွဲအိမ်ရှင်အဖြစ်။ ဤအဖြစ်ရပ်များမှပူးတွဲအလည်အပတ်ခရီးဖော်ထုတ်ရန်ကူညီခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့်မိသားစုမှာပျေါပေါကျကြောင်းပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ထို့အပြင်မိသားစုကမ္ဘာ့ဖလားနေ့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အချိန်ဇယားအပေါ်ဖြုန်းနိုင်ပါ။ တစ်မိသားစုအားလပ်ရက်ခဲ့သောအဓိကအရာ။ နေ့တိုင်းတစ်ခက်တစ်နေ့ပြီးကျနော်တို့ကိုသူ likes ဘာလုပ်, အပန်းဖြေဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်, နဲ့ full-စုံတဲ့မိသားစုဆက်သွယ်ရေးလုံလောက်သောအချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်နေ့ကမိသားစုကိုအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းကွာတိုင်းပြည်အတွင်းဘယ်နေရာမှာမဆို၏နေ့စဉ်ပျားပန်းခပ်လှုပ်ရှားရာမှရွှေ့ဖို့ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သငျသညျတစ်ချိန်တည်းမှာသူ၏အကြံအစည်နှင့်ခံစားချက်များကိုမျှဝေခြင်း, အတူတကွ kebabs ကြော်နိုင်ပါတယ်။ ထိုအကြား၌ကြက်တောင်, ဘော်လီဘောသို့မဟုတ်အခြားအကြိုက်ဆုံး pastime ၏အပန်းဖြေဂိမ်းတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့အမျိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ကလေးတွေဖြေလျော့ခြင်းနှင့်ဝိုင်းလေးပေါ်မှာပျော်စရာရှိသည်, မိဘများကသူတို့ကိုကြည့်ပျော်မွေ့မည်ရှိရာအပန်းဖြေပန်းခြံ, သွားရောက်လည်ပတ်။ ဒီပါတီစောင့်ရှောက်ဖို့ပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်ကမိသားစုရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်ဟာသအတွက်ရုပ်ရှင်ရုံမှပူးတွဲခရီးစဉ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့ပြဿနာကနေလွတ်မြောက်မိမိမိသားစုနှင့်အတူကိုမွငျလြှငျအဘယျသို့မိမိတို့တွေ့ကြုံဝေမျှနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ပြပွဲနှင့်ပြတိုက်မှတစ်ဦးကပူးတွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်သိကောင်းစရာများဖွစျလိမျ့မညျ အားလုံးမိသားစုဝင်များအဘို့အ pastime ။ တစ်အကြိုက်ဆုံးကော်ဖီဆိုင်မှာနေ့လယ်စာပြီးနောက်နှင့်အနာဂတ်အစီအစဉ်များကိုဆွေးနွေးပါ။
သငျသညျတစျနေ့တှငျအပေါငျးတို့သညျကြှနျုပျတို့၏အစီအစဉ်များကိုထုတ်သယ်ဆောင်ရန်မရကြဘူးဆိုရင်တောင်စိတ်မပူပါနဲ့။ သင်ကတနင်္ဂနွေပေါ်မှာတစ်ခုခုရွှေ့နိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့မိသားစု Day ကိုအဘယျသူအရေအတွက်အရေးမထားဘူး။ သင့်ရဲ့ချစ်ရသူအတွက်အချိန်ပါစေနိုင်ရန်အတွက်တစ်နှစ်အတွက်အလုံအလောက်ရက်ပေါင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအားလပ်ရက်, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်မိမိတို့ကိုယ်အဘို့အစီစဉ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အသီးအသီး၏ဘဝအတွက်မိသားစုထက်ပိုပြီးအဖိုးတန်ဘာမျှနှင့်၎င်း၏စောင့်ရှောက်သောစေရန်ကြိုးစားအားထုတ်ပါစေရန်လိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိ။ ထိုအခါအချိန်အတူတကွသုံးစွဲနှင့်ဤ၌ရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှအကူအညီ chat ။
"Wonderland ထဲမှာအဲလစ်" ၏စတိုင်ပါတီ
ထိုမိနျးမ၏ 50 နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်ဘယ်လိုနေသလဲ?
စင်္ကြံထဲမှာကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ tiles - ချော
တိုင်းအရသာများအတွက်အကောင်းဆုံးအသစ်နှင့်မူရင်းချက်ပြုတ်နည်းများ - ယိုပန်းသီးကနေဖန်ဆင်းတော်!
ချိုမြိန်ခြင်းနှင့်အချဉ်ဆော့စ် - လွယ်ကူသောစာရွက်
သောကြောင့် Melania Trump ခရိုအေးရှားကနေကျောင်းတရားစွဲဆိုမည်ပြင်ပကြော်ငြာများ၏